Software ye manejimendi eCommerce | ECommerce nhau
Icho chokwadi chekugadzira online chitoro chakabatanidzwa kune rako bhizinesi parizvino iri nyore maitiro aunogona kuita kuburikidza neCommerce software. Parizvino une zvimwe zvirevo zvinogona kubatsira zvakanyanya pane zvaunofarira, senge Prestashop, Shopify, WooCommerce kana Magento. Kubva kwaunogona kubata yako bhizinesi bhizinesi zvinobudirira kubva zvino zvichienda mberi.
Chii chinokutendera iwe kuti uite kuburikidza neaya software? Zvakanaka, zvirinani, zvakasununguka kugadzira uye kugadzirisa chitoro chepamhepo Asi pamusoro pezvo, ivo vanofambisa basa rekudzora ese iwo maitiro ane chekuita neiyo Internet kutengesa. Semuenzaniso, mune chaiyo kesi yekugadzirira uye kuendesa kwezvigadzirwa zvinyorwa zvatino tengesa kuburikidza nemakambani aya.
Asi kukura kwayo kunoenda zvakanyanya nekuti zvinokanganisa otomatiki ezvekutumirwa uye ese marudzi ekushambadzira ekushambadzira. Zvese zviri zviviri kuburikidza nemaitiro echinyakare uye kuburikidza nemagariro Nerutsigiro ruchazove mune zvese zviitiko rakasununguka, intuitive uye yakapusa. Kusvika pakuti pakupedzisira ivo vanozokubatsira iwe kuvaka kuvimbika uye kukwezva vatengi vako, kukurudzira misika mitsva uye kuwedzera kutengesa.
1 Management software: mabasa ayo
2 Mabasa anogona kuitwa mukutengesa kwepamhepo
3 Zvirongwa zvakapihwa kubatanidza mabasa
Management software: mabasa ayo
Chero zvazvingaitika, chishandiso cheE-commerce chine simba chinobatsira makambani ane hunhu kuti atengese zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu nenzira iri nyore kupfuura nakare kose. Iko, aya ndiwo mamwe emabasa makuru anoratidzwa neane manejimendi software yezvitoro kana emabhizinesi epamhepo:
Ivo vanogona kunyange kusvika taura zvinhu kuitira kuti vatengi vave nerutsigiro rwuri nani mune ruzivo rwavo. Nekuda kweizvozvo, hukama nevatengi kana vashandisi huchave hwakawanda kwazvo kupfuura pakutanga.
Rutsigiro runonyanya kubatsira kuwana ruzivo nezvezvikamu zvakashanyirwa uye chii chakanyanya kukosha, kuziva zvigadzirwa zvinotengwa nevashandisi.
Mabhenefiti avo anosvika padanho rekuti macomputer masystem anopa maturusi akakosha kuna configure dzakasiyana nzira dzekubhadhara uye kutumira kubva pawebhusaiti inogoneswa nezvitoro zvepamhepo.
Mabasa anogona kuitwa mukutengesa kwepamhepo
Aya mapurogiramu emakomputa anobatsira kwazvo kuita mamwe mabasa mukutungamira kwemakambani aya. Kubudikidza nekugadzirisa chaiko kwebasa, asiwo nemupiro wemamwe magadziriso anogona kubatsira zvinangwa zvavo. Nekuti izvo zvese ndezvekuti izvi zvekutengesa zvinowedzera uye iri rimwe remabasa epamhepo bhizinesi software. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera zvatiri kuzokupa kwauri mushure meruzivo urwu:
Iyo software inokutendera iwe kuti upe rutsigiro rwebhizinesi kumabasa anodiwa manejimendi reWebhu bhizinesi:
Kugadziriswa kwezvinyorwa: uko iri rubatsiro rwakakwana kuburitsa rondedzero yayo, mutengo uye kunyange mafoto kana zvichidikanwa. Nesangano rakazara mumhando iyi yeruzivo sezvazviri sezvazvinodiwa.
Kugadziriswa kwevatengi: imwe yedhata yako yakakosha inozoratidzwa, sekuvimbika kwavo, zuva rekunyora kana maitiro mukutenga zvigadzirwa.
Kuongorora nekugadziriswa kwemirairo: kwaunogona kuona ese matanho mune ino yekutengeserana nzira, kubva pakutanga kusvika kumagumo. Sezvo ichi chichifanira kunge chiri chitoro chaicho icho chiri icho chinotungamirwa zvigadzirwa izvi zveyakanyanya yepamusoro sainzi yemakomputa.
Order manejimendi: icho chakakosha chikamu chekusimudzira kwakanaka kwebhizinesi iri uye rakavakirwa pane chimwe chinhu chakakosha sekutungamira bhizinesi. Iko kunowanikwa zviitiko zvezviitiko zvakadaro mubhizimusi repamhepo zvinoonekwa, sekubhadharisa, accounting kana kudzora kubhadhara, pakati pezvimwe zvakakosha.
Kufungidzira kwemaitiro ese: chikamu chakabatana zvakanyanya nezvivakwa zvewebsite uye mune ino kesi inopa iyo data yakatorwa kubva kune ese manejimendi uye ekushandisa maitiro eruzivo rwunopihwa kuburikidza neiyi chiteshi mune yekutaurirana. Saka zvakakosha, zvese kuchengetedza vatengi varipo uye kukwezva vatsva. Iko kune ruzivo irworwo kuita mabasa emari nechitoro chepamhepo kana commerce.
Zvirongwa zvakapihwa kubatanidza mabasa
﻿Kune imwezve mhando yesoftware isingakwanise kushomeka muchitoro chepamhepo kana kutengeserana uye ndiyo iri iyo inosangana nekubatanidza iyo yakakosha mabasa mukutungamira kwayo. Iyi e-Commerce manejimendi module ine yakawanda mhinduro yekuzadzisa zvese zvazvino zvinodiwa kubata online chitoro. Pakati peavo vanomira, pamusoro pevamwe, inoteerera dhizaini, yekutengesa intranet, mitauro yemitauro yakawanda kana accounting, pakati pezvimwe zvakakosha. Asi zvakare, kusangana kwakasimudzirwa pamusika zviyero senge izvo zvinopihwa nemamwe makambani akabatana nehunyanzvi hutsva.
Iko kushandiswa kwezvirongwa izvi kunogadzira kuti pakupedzisira iwe uve nezvimwe zvakateedzana zvemabhenefiti, senge iwo atinongedzera pazasi:
Inojekesa ese mabasa nenzira inoshanda kwazvo uye kugadzirisa ese mashandiro mukirasi ino yemakambani.
Iko kuchengetedza kunogona kuwanikwa mukuhaya zviwanikwa zvevanhu uye izvo zvinogona kuve zororo rakakura kune zvido zvemakambani edhijitari aya.
Iva, kuburikidza nechirongwa chimwe chete, zvese zvaunoda kubhadharisa, kuunganidza uye kubhadharisa portfolio, kuverenga kana kambani accounting.
Iyo inokurumidza iwe yaunotora iyi mabasa uye kuti inogona kukwidziridza kuita kwako pane mabasa akaitwa kubva zvino zvichienda mberi.
Uye pakupedzisira, mikana yakawanda yekusiyanisa mabasa pasina kumboisa njodzi dzekambani pachayo mungozi. Nemhando yepamusoro muzvirongwa zvakajekeswa nemakambani ematekinoroji matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Software ye manejimendi eCommerce